Furtuuwwan Qaxxaamuraa Fakkafamawwaniif
Furtuuwwan qaxxaamuraa Fakkiiwwaniif
Kan armaan gadii tarree furtuuwwan qaxxaamuraa galmeewwan Fakkiitti murtaa'eedha.
Dabalataanis furtuuwwan qaxxaamuraa [officename] fayyadamuu ni dandeessa.
Furtuuwwan Dalagaa Fakkiwwaniif
Barruu ida'i yookiin gulaali
Wantoota dhuunfaa gulaaluuf,gartuu bana.
Gartuu gulaallii cufi.
Qaaqa Bay'ifamaa bana.
Iddoo fi Hagamtaa qaaqa bana.
Waa dhugoomsu bana.
Qabxiiwwan gulaallii ibsa/dhaamsa.
Goodayyaaf kan mijaa'u.
Furtuu Baay'isuu(x)(lakkoofsa yaadannoo)
Fuula hunda argii keessaaf akka mijaa'utti guddisa.
Furtuu (÷) hiruu(lakkoofsa yaadannoo)
Filannoo ammee irratti faaraan guddisa.
Wantoota filataman gurmeessa.
Gartuu filatamehi gurmeesu.
Wantoota filataman walitti maka.
Wantoota filataman walitti hin maku.
Gara fulduraa geessi.
Gara duubatti ergi.
Furtuuwwan Qaxxaamuuraa Fakkiiwwanitti murtaaée
Fuula duraanitti jijjiruu
Fuula ittaanutti jijjiruu
Gara baqqaana darbeetti jijjira
Baqqaana ittaanutti jijjiiruu
Wanticha filatame kallattii furtuu xiyyaatti sochoosa.
Mul'annoo fuula kallattii furtuu xiyyaatti sochoosa.
Jalateesa wanticha harkifamee yeroo qabduun hantuuttee gadhifamtuu uuma.
CommandCtrl+Enter gabatee cuqoo waliin Galcha (F6) fakkasa sajoo wanta kamashaarraa.
Fakkii wantaa duraantoo hammamtaa hhandhuura mul'annoo ammee keessatti Saaga.
Gluumsa wantichaa filatameef bana.
Haalata barruu galcha
Haalata barruu galcha,yoo barruun wantaa filatamee.
Haalata barruu galcha,yoo barruun wantaa filatame.yoo barruun wantoota hudaa fuula irra keessa naannessite, fuuli haaraa ni saagama.
FurtuuDirqalaAlt tuqiiti,hantuuttee waliin harkisi,wanta kaasuu yookiin haammamtaa isa jijjiirtuu haandhuura wanta gara alaa irraa.
DirqalaAlt+Shift+click an object
Wanticha duuba wanta ammee filatame fila.
Wanticha fuuldura wanta ammee filatame fila.
Furtuu jijjiirraa wayita wanti filatamu
Wanta gara yookiin filannicha irraa ida'aa yookiin haqa.
Shift+hantuuttee waliin harkisa
Sosochiin wanticha filatamee baay'ifamoota digrii 45 dirqisiifama.
Jijjiiraa+wayita wanta uumamuu yookiin hagamtaa jijjiiruu harkisa
Bal'inaa fi dheerina wantichaa gara baayífamoota digirii 45tti dirqamsiisa.
Wantoota fuula irraa kan akkataaa faallaa-duraa duubaan isaaniitiin uumamanii naannessa.
Wantoota fuula irraa kan akkataaa faallaa-duraa duubaan uumamanii naannessa.
Haalata ammee baasa.
Kan armaan gadii tarree furtuuwwan qaxxaamuraa LibreOffice Impreessiif
furtuuwwan qaxxaamuraa waliigalaa LibreOfficekeessatti fayyadamuu dandeessa.
Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane
Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.
Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.
Move selected slides to end of Slide Sorter list.
Move selected slides to start of Slide Sorter list.
Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.
Wanta Fakkasuuf furtuuwwan quxxamuraa
Title is: Furtuuwwan Qaxxaamuraa Fakkafamawwaniif